किस गर्नलाई हो रुउसले हाँस्दै सोधी १ हो भने आँखा चिम्म गर्दिन म ।
होइन के सरप्राईज दिनका लागि हो १ मैले भने ।
वाउ।।।। ,आँखा खोल्ने बित्तिकै उसले आफ्नो हातमा रहेको घडी देख्दा यही भनेकी थिई ।
परीक्षा सकिए पछि अस्मिताले मलाई भनेकि थिइ, दादा, कूलधारातिर एउटा रुम खोजिदिनु न है १ अब भाइ पनि यतै कलेज मै आउँदैछ ।
दिदी भाइ दुवैलाई राम्रै लागेछ फ्ल्याट । घरको साहुसँग कुरा गरेर महिनाको तीन हजार भाडा दिने सहमतिमा कुराको छिनोफानो गरियो ।
१५ दिन जतिको छुट्टी थियो, परीक्षा पछि । तर दिदी भाइ दुवै घर नजाने भएछन् । उसको कोठाको सबै बन्दोबस्त मिलाई दिएर एक हप्ताका लागि म घर तिर हानिएँ । घर नगएको धेरै भएको थियो । कतिखेर देख्न पाइएला झैं भइरहेको थियो, आमा बुबालाई । अन्ततः घर पुगेपछि त्यो चहाना पूरा भयो ।
आमा बुबा मन्दिरका देवताभन्दा माथि छन् । यो कुरा मैले अस्मितालाई पनि धेरै पटक भनेको छु । कहिले काहीँ उसले मलाई सोध्थी, दादा १ तपाइँले मलाई र आफ्नो बुबा आमामध्ये कसै एकलाई रोज्नु पर्यो भने को हुन्छ तपाइँको रोजाई रु मैले सहजै भनिदिन्थे, आमा बुबा मैले पुज्ने देवता हुन्, अनि तिमी मेरो प्राण । यी दुवै चिज बिना आफ्नो अस्तित्व कल्पना गर्न सक्दिन ।
भाइलाई खोइ त र ? अस्मितालाई सोधेँ ।
तपाईंको सालोलाई धेरै चिज मन पर्दैन, अस्मिताले हाँस्दैँ भन्न थाली, भेना पो मनपर्यो कि परेन र ?
यो के भइरहेको छ १ म अलमलिएँ । म सोच्न पुगेँ । होइन भने आफ्नै भाइको अगाडि उ किन यस्ता कुरा गर्दैथिई । तर म केही बोल्नै सकिन । बस्, नजरको सहायताले तिमीलाई पख भन्ने भाव उप्रति फ्याँकिरहेको थिएँ । केही नबोली हाँस्दैँ हाँस्दैँ उ किचनमा गई, खाली कप लिएर ।
भाइ पनि हाँसिरहेकै थियो । किचनमा गएर अस्मितालाई सोधें, अस्मिता अब तिम्रो भाइले थाहा पायो यार । हाम्रो रिलेसन चलेको कुरा, बेकारमा जान्ने भएर किन त्यस्तो कुरा गरेकी र ?
कूल डाउन दादा १ उसलाई मैले पहिले नै भनिसकेको थिएँ, हाम्रो रिलेसनको बारेमा । तपाईंको मुहारको एक्सप्रेसन देखेर पो हाँस उठ्यो । डेन्जर, हाँसोको खित्का छोड्दै भनी । उसको र मेरो रिलेसनको बारेमा भाइलाई थाहा भएको कुरा मलाई ज्ञान नै थिएन । त्यसैले म आत्तिएको थिएँ त्यस समय । उसै बखत मेरो मुहारमा देखिएको एक्सप्रेसनले गर्दा दिदी भाइका लागि हाँसोको पात्र बनेंछु । तर पछि मै आफैंलाई हाँसो उठ्यो, त्यो कुरा सम्झेर ।
त्यसो भए, भाइलाई सबै कुरा थाहा छ हैन रु, अस्मितालाई प्रश्न गरे । अँ, उसले यति मात्र के भन्दै थिई उसलाई मैले मेरो अघिल्तिर तानेर उसका नशालु ओठमा किस गरेँ । उ आँखा चिम्म गरेर मेरो अङ्गालोमा बेरिई ।